Dhageyso: Cumar C/rashiid “Labadii sano ee aan Ra’iisal wasaraha ahaa wax heshiis ah oo aan la galnay Imaaaraadka ma jirin’’ – Walaal24 Newss
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in uu jiray heshiis la xiriira dekedda Berbera mid Ganacsi iyo mid Meletari oo ay la galeen Imaaraadka Carabta.
Sharma’arke ayaa sheegay in uusan jirin muddadii uu xilka hayay heshiis militari iyo mid ganacsi oo dhaxmaray iyaga iyo Imaaraadka Carabta.
‘’Waxaan idin cadeynayaa labadii sano ee aan dalka ra’iisal wasaaraha ka ahaa ma jirin wax heshiis militari ama ganacsi ah oo na dhaxmaray Imaaaraadka, gaar ahaan haddii ay ahaan lahaayeen arrimaha dekeddaha sida Berbera ama Boosaaso’’ ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Laakiin wuxuu sheegay in uusan ka warqabin ama ka hadli karin xukuumadihii isaga ka horeeyay, laakiin arinta ka hadlayaa tahay oo kaliya labadii sano uu dalka ra’iisal wasaaraha ka ahaa ama xukuumadiisu jirtay.
‘’Kuwii iga horeeyay uma hadli karo, waxaa ka hadli kara mas’uuliyiintii waqtigaa joogay, laakiin Labadii sano ee aan mas’uuliyada hayay wax heshiis ah oo aan la galnay Imaaaraadka ma jirin’’ ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Hadalka ka soo yeeray ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharm’arke ayaa imanaya xili dhawaan wasiiru-dowlaha arrimaha dibeda Imaaraadka uu sheegay in heshiiska dekedda Berbera ay la galleen dowladdihi hore, inkastoo uusan cadeyn gaar ahaan cidda heshiiskaa uga mas’uulka aheyd dowladii hore ee Soomaaliya.
Halkan hoose ka dhageyso Cumar C/rashiid:-
Daawo: Ra’iisal wasare Kheryre “In la tirakooba shaqaalaha waxay inoo suurta galin in la helo tirada iyo tayada aan haysano inta ay la egtahay”
Janee Koga says:
Dad ku heyb ah Madaxweyne Farmaajo oo loo xirtay aargudasho xirigii Cabdrashiid Janan
Dowladda Qatar oo ku dhawaaqday in ay billaabayso mashruuca dhismaha Dekadda Hobyo
Maamulka G. Banaadir oo maanta dhagax dhigey waddo laga hirgalinayo Degmada Shingaani
Faah faahin ka soo baxeeysa Khasaaraha ka dhashtay Qaraxii lagu Weeraray Xarunta D/Hodan
Daawo: Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaaraha Itoobiya oo si wadajir ah Shir jaraa’id ugu qabteen Xarunta Villa Soomaliya
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo laciiday Bukaanada Isbitaalada Madiina, Turkiga Ex Digfer iyo Xooga